रूसका बीच सबैभन्दा लोकप्रिय बुल्गारियामा "कम्चिया" एसओक हो। यो रिसोर्ट रिसर्च यसको अनोखी स्थान, सेवा को गुणवत्ता, उत्तम सफाई र छुट्टिनेटर तिर दिशामा असामान्य रूपमा तातो रवैयाको लागि प्रसिद्ध छ। तपाईं त्यहाँ दुई तरिकामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो, त्यहाँ मास्कोमा एक विशेष कार्यक्रम छ, जसको अनुसार बालकट्का र बालबालिकालाई कहिलेकाहीँ उनीहरूका आमाबाबुलाई पठाइएको छ। दोस्रो, तपाईं त्यहाँ टिकट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
बुल्गारियाको सबैभन्दा ठूलो पर्यटक केन्द्र वार्ना र गोल्डेन रेतको रिसोर्टमा गर्व छ। "कामचिया" यी आकर्षणहरूको नजिक हुनुहुन्छ। वर्न त्यहाँबाट करिब 30 किलोमिटर छ र गोल्डेन रेण्डमा 18 वटा अधिक छ। एसओकेको एक फल पेय संगको संक्षिप्त नाम कुनै पनि तरिकामा जोडिएको छैन र निम्नानुसार प्रमाणित हुन्छ: एक सेनेटरीज र स्वास्थ्य परिसर। कम्चिया रिसोर्टको वरिपरि बह्ने एक नदीको नाम हो र समुद्रमा उडिरहेको छ। संगोष्ठीको बिन्दुमा, तपाईं डुङ्गाले 15 मिनेटको लागि तैर्न वा पैदल हिँड्न सक्नुहुन्छ। पानीमा एक महत्वपूर्ण तापमान भिन्नता छ (+10 о С नदी र +22 о С समुद्र)। यस सम्पत्तिलाई खुट्टाका लागि विदेशी थर्मल मालिशको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्चिया - नदी ठूलो सुन्दर र समुद्र हो, धेरै सुन्दर समुद्र तटहरु संग। नजिकैको एक प्रकृति रिजर्भ हो। एक रोचक तथ्य यो हो कि बुल्गारियामा कम्मिडियाको एक गाउँ हो, समुद्रबाट टाढा टाढा छ र Soka वर्णन गर्न कुनै सम्बन्ध छैन।
कम्चिया रिसोर्ट सुविधा
सोभियत समयमा समेत, बुल्गारियाका बाँकी बासिन्दाहरूलाई धेरै ध्यान दिइयो। "कम्चिया" एक राम्रो परम्परा को एक उत्कृष्ट निरंतर हो। परिसरको क्षेत्रमा बालबालिकाको स्वास्थ्य शिविर लन्डोज र रेडुगा, एक ठूलो रेस्टोरेंट क्यालिल, बच्चाहरु को मनोरञ्जन र विकासको लागि केन्द्र होम्बारिट, बच्चाहरु र वयस्कों को लागि एक नयाँ कटेज-प्रकार निपटान, एक बेलुनेनिक जटिल Zdravets, एक नयाँ खेल केन्द्र केन्द्र र 2013 मा खोलियो, आधुनिक बालबालिकाको क्याप "काली सागर"।
एक तातो भूमध्य भूमध्य जलवायु बुल्गारिया को लागि जानिन्छ। "कामचिया", जो समुद्री तट मा छ, बच्चाहरु र वयस्कों को लागि सबै वर्ष को दौर मा खुला छ।
ग्रीष्म यहाँ गर्म छ, तर गर्म रूपमा जस्तो, उदाहरणका लागि ग्रीस वा मिश्रमा। तीन गर्मीको महिनाको औसत तापमान सामान्यतया +26 ... +29 С С, र समुद्रमा पानीको तापमान +25 ओएसमा राखिएको छ। समुद्रमा एकै समयमा रेत +60 о С! मई र सेप्टेम्बरमा केवल एक द्रुत डिग्री कूलर। अक्टोबर र अप्रिलमा थर्मामीटरको बल्ब बढाउँछ +16 ... +18 ओ एस दिनको समयमा। सर्दिका महिनाहरूको समयमा, तापमान लगभग सधैं सकारात्मक छ। तथापि, त्यहाँ केही वर्षहरू थिए जब गर्मीमा हवाले +40 ओ एसमा ताप्यो, र जाडोमा यो धेरै ठुलो थियो (-25 ओएस एस ), बाहिर गयो र लामो समयसम्म बर्फीला थिएन। वर्षाको सन्दर्भमा, कामचट्कामा, उनको संख्या ग्रीष्म र सर्दियामा लगभग उस्तै छ।
एसक "कामचिया", बुल्गारिया। क्याम्प "इंद्रधनुष"
त्यहाँ पृथ्वीमा अद्भुत स्थान छ, जहाँ हरेक बच्चा खुशी हुनेछ। यो एक स्वास्थ्य शिविर "इंद्रधनुष" हो, बल्गेरियामा "कमचिया" मा स्थित छ। यहाँ बालबालिकाले आरामदायक भवनहरूको प्रतीक्षा गर्दै बौछार, शौचालय, एयर कंडीशनिंग, टिभि र आवश्यक फर्नीचरको सेट। तिनीहरू सबै दुई कोठा हो। प्रत्येक4मान्छे को लागि डिजाइन गरिएको छ। खानेकुराहरू दिनहुँ चार वटा खानाहरू व्यवस्थित हुन्छन्। बच्चाहरु को हरेक दिन रस र फलहरु लाई पेशकश गरिन्छ। शिविरमा अवकाश गतिविधिहरूको लागि त्यहाँ धेरै रोचक सर्कलहरू संग मनोरञ्जन र शैक्षिक बालबालिकाको केन्द्र हो। प्रत्येक बच्चालाई उनीहरूको दुई छनौट र पारीको अन्त्यमा उसले के सिकेको कुरा देखाउन अधिकार छ। साथै बच्चाहरु को लागि स्विमिंग पूल, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक सिनेमा, एक ब्लोरूम, एक फिटनेस सेन्टर छ। समुद्र तट शिविरको छेउमा छ। विच्छेदहरूमा, बालबालिकाहरू उनीहरूको उमेर अनुसार वितरित हुन्छन् तर 20 भन्दा बढी मानिसहरू। पारीको समयमा, अनुभवी अग्रगामी नेताहरू र हेरचाहकर्ताहरू र पछि समुद्र तटमा देखिएका छन् - यसको अतिरिक्त उद्धारकर्ता र मेडिकल कर्मचारीहरू। बेलारूसी मुद्राले बल्गेरिया परिवर्तनको लागि एक आधिकारिक क्रम मा एक महिना मा धेरै पटक। मूल्यवान चीजहरू शिक्षकहरूलाई सौंप्न सकिन्छ।
बच्चाहरू मात्र होइन, तर वयस्कहरू धूप बुल्गारिया हेर्न पनि खुसी छन्। "कम्चिया", क्याम्प र बोर्डिङ हाउस "लङ्गोज" ले बिस्तारै आफ्नो ठूलो र सानो अतिथिहरूको लागि ढोका खोल्छ। सन् 2009मा एउटा नयाँ आधुनिक भवन यसको इलाकामा बनाइएको थियो। अब तिनीहरू 400 व्यक्तिलाई समायोजन गर्न सक्छन्। यस परिसरको ढाँचा यस्तो छ कि गर्मीको महिनामा यो बच्चाको शिविर बन्छ, र समयको बाकसमा सबैलाई लाग्छ, तर विद्यार्थीहरू र युद्ध र श्रमका दिग्गजहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित छ। यहाँ सबै कोठा एक होटल प्रकार को हो जुन आवश्यक उपकरण, आरामदायक फर्नीचर, बाथरूम र शौचालय संग। त्यहाँ पनि3अपार्टमेन्टहरू छन्। यसको अतिथिहरु को लागि, लाङोजले दो रेस्टुरेन्ट, एक इंटरनेट स्टूडियो, दुई अधिकतम सुसज्जित सुसज्जित सम्मेलन कक्ष, एक ठूलो स्विमिंग पूल संग एक फिटनेस सेन्टर, एक व्यायामशाला, स्पा र सौना प्रदान गर्दछ। बच्चाहरु को लागि धेरै प्रशिक्षण हल्स पनि छन्। परिसरको क्षेत्र सुन्दर पार्क र एक वनस्पति उद्यान संग सजाइएको छ।
बुल्गारिया, पिरिनको गाँउमा बाकी आराम गर्ने भाग्यशाली व्यक्तिहरू, "कामचिया" एसोक जीवनको लागि सम्झना हुनेछ। बच्चाहरु र उनीहरूको आमाबाबुको लागि यो सम्झौता 2012 मा सञ्चालन भएको थियो, त्यसैले यो अझै पनि नयाँ छ। यसको सबै भवनहरू आधुनिक परियोजनाहरूमा बनाइएका छन्, क्षेत्र क्षेत्र राम्रो हुन्छ, र सबै उपकरणहरू ठीकसँग कार्य गरिरहेका छन्। पिरिर एक सुन्दर बाड़को साथमा ठोक्किएको छ, जसको परिमिति संग पर्यो क्यामेराहरू छन्। कोटीहरूमा पनि छन्, त्यसैले सुरक्षा यहाँ शीर्षमा छ। परिसर को क्षेत्र मा एक होटल भवन, 11 कोटेज, gazebos, आकर्षण को लागि खेल मैदान, टेलीभिजन, आउटडोर पूल र बार, गर्मियों को महीनों मा काम गर्दै छन्। कोटहरुमा कोठा उज्ज्वल र विशाल हो,4मान्छे को लागि डिजाइन गरिएको छ। प्रत्येक फ्रिज संग एक किचनेट र ताजा पानी संग कूलर छ। तपाईं लाँड्री कपडालाई मैन्युअल रूपमा कोठामा वा लुगाफार्ममा निःशुल्क चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भवनहरूमा त्यहाँ इस्त्री बोर्डहरू छन्, त्यहाँ फलामहरू छन्। परिसरबाट समुद्र तट एक मिनेट दूर छ। यो awnings, केबिन बदलन कपडे, शौचालय र सूर्यो लाउन्स को लागि सुसज्जित छ, तर केवल 30.09सम्म तैरने को लागि खुला छ। भविष्यमा, यात्रीहरू लामो समयसम्म पैदल दूरी भित्र स्थित लन्डोज परिसरको इनडोर स्विमिंग पूल प्रयोग गर्न सक्छन्।
बालबालिकाको स्वास्थ्य शिविर, "ब्ल्याक सागर" (संक्षिप्त कामकाजी, बुल्गारिया) को रूपमा संक्षिप्त 2013 को उद्घाटन गरियो। यसले चार होटल परिसरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन एक गलियारेद्वारा जोडिएको छ, त्यसकारण सडकमा छोडेर एकलाई अर्कोबाट एकमा पुग्न सकिन्छ। भवनहरू कन्सर्ट हॉलसँग र बालबालिकाको रचनात्मक विकासको साथ पनि जोडिएको छ। शिविरको इलाकामा यूरी गागिनन नामक प्रशिक्षण केन्द्र हो। "काली सागर" 10 देखि 18 वर्षको उमेरमा 600 बच्चाहरु सँगै प्राप्त गर्न सकिन्छ। भवनहरू विशाल र उज्ज्वल कोठा हुन्, जसरी3वा4व्यक्तिको लागि डिजाइन गरिएको छ। प्रत्येक बच्चालाई चीजहरूका लागि कोठरीको साथ प्रदान गरिएको छ। अवकाश गतिविधिहरूका लागि "ब्ल्याक सागर" स्विमिंग पूल, गेम्स रूमहरू, जिम, एक संगीत लाइब्रेरी, सङ्गीत र नृत्यको लागि हल छ। शिविर बालबालिका, उत्सवहरू, प्रतियोगिताहरू, कन्सर्टहरू, रोचक खुल्ला र पातलो बन्द गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्।
न केवल अद्भुत मनोरञ्जन क्षेत्रहरु, तर बुल्गारिया को उपचार केन्द्र पनि मशहूर छ। एसओक "कम्चिया" को बैङ्कलोजिकल, मेडिकल र नैदानिक जटिल "Zdravets" मा स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रस्ताव गर्दछ। यो 2011 देखि कार्य गरिरहेको छ र पहिले नै सयौं व्यक्ति प्राप्त गरेको छ। यो जटिलतामा, डाक्टरहरूले निम्न दिशामा काम गर्छन्:
ENT को ओर्गेन्स;
नवीनतम चिकित्सा उपकरणहरूसँग लैजान एक नैदानिक केन्द्रमा निदान गरिन्छ। त्यहाँ एक्स-किरणहरू र एन्गोग्राफ छन्, धेरै कार्यक्रमहरूसँग सुसज्जित छन्, प्रयोगशाला हो। चिकित्सीय, पुनर्वास र निवारक प्रक्रियाहरू फिजियोथेरेपी, विद्युत्, लाइट, पानी र गर्मी थेरेपी, साँघुरो, मालिश, बेलुनील प्रक्रियाहरू समावेश छन्। "Zdravets" जटिल बच्चाहरु र वयस्कहरु स्वीकार गर्दछ। उपचारको लागि एक उत्कृष्ट अतिरिक्त कम्मिडियाको ताजा ताजा हवा र ब्ल्याक सागरको उपचारको जल हो।
खकासियाको मनोरञ्जन केन्द्रहरू: तालबाट आरामको आराम छान्नुहोस्!
Oceanarium "RIO" मा Dmitrovka: मोड को संचालन, समीक्षा
बाबुलोव्स्की पार्कमा पुष्किन र पौष्टिक सार स्नान
सेंट सेन्ट पीटर्सबर्ग को प्रिमोर्स्की जिल्ला मा लखनस्की स्पिल: मनोरंजन र माछा पकडने
कसरी मास्कोबाट अब्खाजा भेट्न
स्नायु विज्ञान को वैज्ञानिक केन्द्र (मास्को, Volokolamsk राजमार्ग, 80): संरचना, व्यवस्थापन
एक समाजशास्त्री एक विशेषज्ञ हो? पेशे समाजशास्त्री। प्रसिद्ध समाजशास्त्र
Banal: अर्थ, बोलीमा प्रयोग
बच्चाहरु को साइकलहरु3वर्ष देखि: मोडेल को चयन, चयन नियमहरु
ल्यापटप MSI GE70 2PE अपाचे प्रो: विशेषताहरू, अवलोकन र मालिकको समीक्षा